Radio Sudoorawaz 95 Mhz सार्वजनिक निर्माणका काम नै मुख्य प्राथमिकतामा
बुधवार जेठ २३, २०७५ पुष्कर भण्डारी
पहिले गांखेत गाविसको अध्यक्ष हुनु भएको थियो ? संघियता पछि अहिले तपाई गाउपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएको पनि १० महिना भई सक्यो ? कसरी सञ्चालन गरि हरनु भएको छ आलिताल गाउपालिका लाई ?
पहिले केन्द्रमा एउटै सरकार थियो । जिल्ला बाट आएका निर्देशन अनुसार काम गर्नु पथ्र्यो भने अहिले फरक छ । आफै कतिपय नियम कानुन बनाई काम गर्नु परेको छ । बजेट थोरै हुन्थ्यो अहिले बढी छ । चुनौती पनि छ अवसरहरु पनि छन । अनि यो १० महिनाको सुरु सुरुमा अलि अन्यौल थियो । अब अन्यौलहरु हट्दै गएका छन । अहिले हाम्रा योजना कार्यक्रमहरु राम्रो ढंगले भई रहेका छन ।
तपाई एउटा व्यवसायी पनि हो ? व्यवसाय बाट जनप्रतिनिधी भएर आउदा कस्तो लाग्यो ?
म व्यवसायी भए पनि २०५४ सालमा वडा अध्यक्ष भएर जनता संग काम गरेकाले खासै गाह््रो अप्ठेरो भएन । कर्मचारी साथीहरु बाट राम्रो साथ पाई रहेको छु मैले । तर दरबन्दि अनुसारको पदपुर्ति हुन नसक्दा समस्या छ । एउटै वडा सचिवले दुई भन्दा बढी वडा हेर्नु पर्ने भएका कारण योजना तथा विकासका काममा अलि ढिलाई हुनुका साथै सेवा ग्राहीले पनि समयको समस्या खेप्नु परेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा मुख्य प्राथमिकता के लाई दिएर काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
सार्वजनिक निर्माणका काम नै मुख्य प्राथमिकतामा छन । त्यसमा पनि ग्रामिण सडक नै प्राथमिकतामा छन । टोल, वस्ति, गाउ, वडा बाट योजना छनौट गरिदा सडक नै माग भई आएकाले सडक निर्माणको काम लाई प्राथमिकता दिईएको हो । हुन पनि सडक नहुदा अन्य विकासका काम गर्न पनि गह््रो । त्यसैले बढी बजेट चार करोड सम्म सडक निर्माणमा विनियोजन गरेका थियौ ।
चुनावका बेला मत माग्न जाँद मतदाता संग विभिन्न बाचा गर्नु भएको होला ? गरेका बाचा पुरा गर्न काम सुरु गर्नु भयो कि भएन ?
जे बोलेका थियौ बिर्सेका छैनौ । कामको सुरुवात संगै सबै गाउ वस्तिमा कुनै न कुनै योजना परेकाले स्थानिय सामु अहिले पनि जाँदा खुसी छन । स्थानियका सडक, बाटो घाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिचाई, खानेपानिका माग थिए अहिले तिनै कामहरु कति पय भई सके कतिपय हुदै छन । गाउपालिकाको गुरु योजना बनाएर अघि बढ्दै छौ ।
आलितालको चालु आर्थिक बर्षको कुल बजेट कति हो ? आय श्रोत के छन ? वडामा कति कति बजेट विनियोजन गर्नु भएको थियो ?
कुल बजेट हाम्रो २३ करोड ९५ लाख र आन्तरिक आय ३० लाखको अनुमान गरेका थियौ । अहिले सम्म आन्तरिक आय ६० प्रतिशत सम्म संकलन भएको देखिन्छ । प्रत्येक वडा लाई हामिले एक÷एक करोड बजेट विनियोजन गरेका थियौ ।
कतिपय कानुन स्थानिय निकाय आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ ? आलितालले कति कानुन बनायो ? कति बनाउन बाँकी छन ?
थुप्रै कुराहरुको ड्राफ्ट तयार भई सकेको छ । मन्त्रालय बाट उपलब्ध फर्मेट लाई आधार मानेर हामिले ६/७ वठा फाईनल भई सकेका छन । विपदमा परेका लाई आर्थिक सहयोग गर्ने एउटा कार्यविधी बनाएर पास ग¥यौ । भ्याकोलोडर सञ्चालनको कार्यबिधि पनि पास गरेका छौ भने आर्थिक बार्यबिधि गरी अन्य पनि पास गरि सकेका छौ । अन्य थुप्रै बनाउन बाँकी छन ।
आलिताल गाउपालिका प्राकृतिक विपदको जोखिम भएको क्षेत्र हो । विपद जोखिम व्यवस्थापन गर्न कुनै योजना सञ्चालन गर्नु भयो कि भएन ?
विभिन्न संघ संस्थाले पनि यसमा काम गरि रहेका छन । हामि संग जोखिममा परेका लाई उद्धार गर्न केही अति आवश्यक सामाग्रीहरु पनि छन । विपद व्यवस्थापनका लागी हामिले ७० लाख बढी बजेट विनियोजन पनि गरेका छौ । यसमा नदी नियन्त्रण र विपद व्यवस्थापन भनेर आपत कालिन कोष स्थापना गरेका छौ । कतिपय स्थानमा तार जाली लगाउने काम पनि भई रहेको छ । बाढी पहिरोको जोखिम कम गर्न बृक्षारोपण अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । यस बर्ष मात्रै दालचिनी, कल्की फुल लगायत विभिन्न जडीबुटीका बोट विरुवा संगै विभिन्न प्रजातीका डाले घाँसका ७० हजार विरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरी स्थापना गरेका छौ ।
१० महिनाको अबधीमा परिणाममा देखिने गरी स्थानिय हर्षित हुने के के काम गर्नु भयो ?
थुप्रै कामहरु देखिएका छन स्थानिय खुसि पनि छन । गाउपालिकाको एउटा भवन निर्माण गरेका छौ । चुनावताका समय सबै वडाहरुमा हिडेर गएका थियौ अहिले वडा नं. ३ को सदरमुकाम चौड बाहेक ७ वटै वडाका गाउमा गाडी चढेर पुग्न सक्छौ । अन्य सिचाई, खानेपानि, सामुदायिक भवन, काठे पुल निर्माणका काम पनि भएका छन । लग भग ७० प्रतिशत योजना सम्पन्न भएका छन ।
आलितालका मुख्य चुनौती र अवसरहरु के के हुन ?
थुप्रै चुनौतीहरु छन । यो एउटा चुरे क्षेत्र हो । माटो जमिन कच्चा छ । बाढी पहिरोको जोखिम क्षेत्र हो । अझै कतिपय गाउ सम्म सडक पुगेका छैन्न । दुर्गम दुर्गम स्थानमा वस्ति छन । खानेपानि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिचाईका अनि बरोजगारीका समस्या छन । तर पनि चुनौती बिच अवसरहरु पनि थुप्रै छन । प्राकृतिक श्रोत साधान आलिताल धनि छ । ढुंगा, गिट्ट, बालुवाका स्रोतहरु खेर गई रहेका छन । यस लाई व्यवस्थापन गर्न सके आयस्रोत बृद्धि गर्न सकिन्छ । सालको काठका लागी प्रशिद्ध ठाउ पनि हो । कृषि पशुपालनमा पनि राम्रो छ । मौरी पालन र बाख्रा पालनको पकेट क्षेत्र हो भने गाई पालनको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । पर्यटकिय क्षेत्र आलितालको आफ्नो अलग्गै मोह छ । आलितालका लागी ७० लाख जती बजेट जुटाई तालको चारै तिर पैदल यात्राका लागी १२ सय मिटर फुट ट्र्याक निर्माण गरि सकेका छौ । पिकनिक स्पोटका लागी तिन वटा घरहरु, शौचालय तालको तल पट्टि बनि रहेका छन भने, आरामका लागी गोल घर छाहारी घर बनि रहेका छन, ढुंगा सञ्चालन गर्ने योजना छ । आलिताल सम्मको सडक मर्मतका लागी ३५ लाख बजेटमा काम हुदै छ, जाने बाटोमा लाईट बोर्ड राख्ने तयारी छ । यस बाहेक अन्य स्रोत साधानहरुको खोजी गरी रहेका छौ । आलिताललाई प्राकृतिक सौन्दर्य संगै कृर्षि, पशुपालन, पर्यटन क्षेत्रका रुपमा चिनाउने प्रयासमा हामि छौ ।